PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-27 - Uthelekiso: 2018 Datsun Go vs 2018 Renault KWID
Uthelekiso: 2018 Datsun Go vs 2018 Renault KWID
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-27 - EZEMOTO NEENCWADI - SISANDA MBETE
KUNINZI osekushukuxwe ngezi moto apha kule minyaka imbalwa idlulileyo oko zafika eMzantsi, okona bekuphambili kukuba ezi moto aziniki khuseleko olwanelisayo kubakhweli, xa sithetha ngemigangatho yokhuseleko kula malanga.
Kodwa thina sithanda ukucinga ukuba ezi moto azakhelwanga ukunika umthengi ubuntofo beemoto ezikhoyo ezidurayo.
Ezi moto zenzelwe ukunika abo bafuna ukuphuma kwizithuthi zikawonkewonke, abantu abafuna ukuzimela balawule ixesha labo bhetele kunokuthembela ngeeteksi neebhasi noololiwe.
IRenault KWID yeyona moto inexabiso eliphantsi ephuma intsha evenkileni apha eMzantsi. Kodwa ngemali eyongezelekileyo ungazikhethela nakwi-Datsun Go. Zombini zithembisa ukunika umqhubi ubuninimoto obungenangxaki, obuntofontofo kweli nqanaba, futhi nokulondoloza kwithontsi lepetroli.
Makhe sithi gqabagqaba siqwalasele ukuba ufumana ntoni apha kwezi moto.
Kwinjini, iDatsun Go ine-1.2 litre 3-cylinder petrol ena-50kW/104Nm, inxulumanise amavili angaphambili ngegearbox ye-5-speed manual. Phaya kwiRenault KWID i-gearbox iyafana, kodwa injini yenye-1.0 litre 3-cylinder yepetroli, ekhupha 50kW/91Nm.
Kwezorhabulo lwethontsi, i-KWID ibhetele ifumana 4.7lt/100km, apho i-Go ifumana 4.9lt/100km. La ngamanani anikwe ngabakhi bezi moto, kodwa thina xa besiziqhube endleleni safumana 5.4lt/100km kwi-KWID, ze safumana 5.9lt/100km kwiGo.
Iifestile zangaphambili kwiDatsun Go zilawuleka ngombane, kodwa ezangemva kusanyanzelekile ukuba usebenzise ingalo ukunyova zivuleke. KwiRenault KWID ikwanjalo kwisinxibo se-Expression, kodwa xa ukhethe isinxibo seDynamique ufumana iifestile zonke zilawuleka ngamaqhosha.
I-KWID iyafumaneka ngeautomatic ekuthiwa yiAutomated Manual Transmission (AMT). Oku kuthetha ukuba igearbox yenye imanual kodwa kukho ikhompyutha etshintshisa igearbox ngokwayo. Kodwa ungalindela ukukhupha imali engange-R10 000 ngaphaya kweKWID ene-5-speed manual. Ndlela le kuxineke ngayo apha phandle xa usiya emsebenzini, ungabe uzenzela lula ngokuyikhupha le mali ibizwa yi-AMT ye-KWID.
Ngaphambili kwi-dashboard kohlukene mpela. Kwi-Datsun Go sisafumana usiba elikhomba isantya endleleni. Kwi-KWID konke ku-digital – isantya, ubungakanani bethontsi etankini, njalo-njalo. Kodwa kwiKWID akukho salathiso sesantya senjini (rev counter). Kwi-Go sikhona isalathiso sesantya senjini, sesombane, njengesalathiso sethontsi etankini. Zombini zine-trip computer ebonisa ukuba imoto irhabula kangakanani amafutha, ukuba ushiyeke ukuhamba umgama omde kangakanani.
Esikuncoma kakhulu kwi-KWID kukuba esiphakathini ufumana i-infotainment esi-screen esicofekayo. Kaloku lonke ulutsha (olusisininzi esithenga kweli nqanaba lemoto) luthanda ukuba apha emotweni kufane noonomyayi wabo ocofeka kwiscreen. Futhi le infotainment system iza sele ifakelwe i-SatNav.
Kwi-Datsun Go awufumani nomathotholo tu. Kufuneke unyuke uthenge isinxibo se-Go Flash ukuze ufumane unomathotholo lowo wesiqhelo. Kodwa ke lo nomathotholo uza sewulungele ukunxulumaniswa nonomyayi womqhubi nge-Bluetooth ne-USB, kukho indawo yokubeka unomyayi ukuze umsebenzise xa ufuna uGoogle Maps wakho okanye xa ufuna ukudlala umculo wakho okunomyayi lowo.
La ngamanqaku ambalwa anele ukuba thina sizikhethele i-Renault KWID phakathi kwezi. Amehlo akaphakelani, kodwa ikwayi-KWID esibona ngathi ingabhetele ukuphila nayo mini ngamini.
Okusalayo, ezi ziimoto ezenzelwe ukuba abantu bakwazi ukuphuma kwiiteksi neebhasi, bayeke ukunyanzeleka bavuke ngo-4 ekuseni ukuleqa erenkini. Ngoko ke, azilungelanga ukubekwa ndawonye neemoto ezintofontofo ezifakelwe okuninzi kwezokhuseleko.
Amaxabiso: Datsun Go - R137 200 Datsun Go Flash - R138 900 Renault KWID Expression - R128 900 Renault KWID Dynamique - R139 900 Renault KWID Dynamique AT - R149 900 Renault KWID Climber - R149 900
Zonke iiRenault KWID zikhatshwa yiWaranti ye-5 years / 150 000 km, ne-Insurance yonyaka mahala.
Zonke iiDatsun Go zikhatshwa yiWaranti ye-3 years / 100 000 km, ne-Insurance yonyaka mahala.